China 1mm PVC yemahara feni jira vagadziri uye vanotengesa Gokai
1mm PVC Mahara Furo Bhodhi
1mm PVC yemahara furo jira ine maseru maseru uye akatsetseka pamusoro pekunze inoita chisarudzo chakanakira mahunyanzvi ekudhinda uye emabhiribhodhi vanogadzira uye zvakare yakakosha zvinhu zvekushongedza kwekushongedza. PVC furo bhodhi pepa rave richishandiswa zvakanyanya kune zviratidzo, zvikwangwani, zvinoratidzwa uye nezvimwe. Iyo furo PVC sheet inogara ichivimbisa yakavimbika, akavimbika mashandiro uye akanaka maitiro.
Kubatsira kwePVC yemahara furo bhodhi
1.Strong uye yakasimba
PVC yemahara furo bhodhi yekurwiswa nemishonga, yakadzikama michini simba uye mukurumari ndiwo makuru einjiniya mabhenefiti ekushandisa mukuvaka nekuvaka kunyorera.
PVC furo Mahwendefa akareruka kuyerwa achienzanisa neplywood uye inogona kukurumidza kuunganidzwa uye kutumirwa, izvo zvinoita kuti ive yakanaka kutsiva yeyakajairwa huni pani.
Iwe unogona nyore kucheka, kuumbika, uye kubatanidza iyo PVC furo mabhodhi zvinoenderana nezvinodiwa.
4 - Kwete-Inotyisa
PVC furo bhodhi yakachengeteka uye eco-hushamwari zvinhu izvo zvave zvichishandiswa kweanopfuura hafu yezana ramakore. Iyo haina huwandu hwakawanda hwe formaldehyde senge zvimwe zvemukati zvekushongedza zvinhu.
PVC furo jira rinopisa kana raonekwa pamoto. Nekudaro, kana sosi yemwenje ikabviswa, vanomira kupisa. Nekuda kweiyo yakakwira klorini yezvinyorwa, zvakawedzerwa PVC zvigadzirwa zvine moto kuchengetedza hunhu.
Iyo mwando-kuramba kwePVC chinhu chakakosha chivakwa, uye vanhu vanoshandisa PVC furo mabhodhi mune akawanda marine mafomu.
PVC furo bhodhi inouya neayo inorwisa-inokanganisa chivakwa uye kugadzikana kwemakemikari izvo zvaizo chengetedza zvakachengeteka kunyangwe panguva yekubatana kwemakemikari.
8. Isina mutsindo
Yakawedzerwa PVC furo jira dzimwe nguva inoshandiswa mukudzivirira inzwi. Nepo kurira kazhinji kusingakwanise kuvharidzirwa zvachose, kudzikisira ruzha kukuru kunogoneka.
Kushanda kwePVC Foam Board
1) Bhodhi rekushambadzira uye bhodhi yemasaini
2) Chiratidziro & kuratidza
3) Kushambadzira pepa rekudhinda, kunyora uye kucheka
4) Kushongedza kwekuparadzanisa madziro uye hwindo kuratidza
Pashure: 20mm PVC furo bhodhi fenicha
Zvadaro: UV yakadhindwa foamboard 2mm